HTC ထုတ်ကုန်များအတွက် GoldCard ဖန်တီးနည်း | Androidsis
HTC ထုတ်ကုန်များ၌ GoldCard တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ
Francisco Ruiz | | HTC က, လဲ tutorial
နောက်လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာမှာမင်းကိုငါသင်ပြမယ် GoldCard ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ devices များအတွက် Android HTCကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူထားသောတရားဝင် rom ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကို update လုပ်ရန်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ format လုပ်နိုင်သည့် micro-SD လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သာအသုံးပြုမည့်သူသည်သာမန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်၊ သင်၏ PC ပေါ်တွင် backup လုပ်ထားပါ ဒီသင်ခန်းစာမစတင်မီ။
ဒီသင်ခန်းစာကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ device ကိုaHTC တရားဝင် firmware၊ ၎င်းကိုအဆင့်မြင့်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အများဆုံးရရှိနိုင်ပါကမိုဘိုင်းဖုန်းအော်ပရေတာများ၏ Firmwares များမှကျန်ရှိသောအမှိုက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားရန် HTC မှအခမဲ့ firmware ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်တာက free မှာပါတဲ့ application ပါ Play Store ကို ခေါ်ဆိုခ GoldCard အထောက်အပံ့ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ execute လုပ်ပါလိမ့်မည် CID de la EMMC2:
အခုတစ်ကြိမ် CID နံပါတ်အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ပြီးဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပူးတွဲပါပုံစံကိုဖြည့်ပါလိမ့်မည် ရွှေတံဆိပ်.
အခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရတော့မယ် PC များအတွက် tool ကို GoldCard Tools လို့ခေါ်တယ်၊ တစ်ချိန်ကဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့လိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ unzip လုပ်ပါမယ် HTC က disk drive (သို့) မှတ်ဉာဏ်ကဒ် (သို့) USB သိုလှောင်မှု mode မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်တို့က execute လုပ်လိမ့်မယ် GoldCard ကိရိယာများ.
drop-down ကိုနှိပ်ပါ HTC MMCကျနော်တို့ option ကိုပေးလိမ့်မည် အားဖြည့် ငါတို့သည်ငါတို့၏သက်ဆိုင်ရာယူနစ်ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် micro SD.
ယခုငါတို့ button ကို click ပါလိမ့်မယ် GoldCard.img ကိုဖွင့်ပါ ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ထားသောပုံစံမှဖြည့်ထားသောစာမျက်နှာမှယခင်ကူးယူထားသောဖိုင်ကိုရွေးပါလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ Patch MMC ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်အပြီးသတ်ဘို့စောင့်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနှင့်အတူငါတို့ရှိလိမ့်မည် GoldCard မှန်ကန်စွာဖန်တီးပြီးကျွန်ုပ်တို့ flash လုပ်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားလိမ့်မည် htc မှမူရင်း firmware အော်ပရေတာများ၏အမှိုက်သရိုက်များကိုအဆင့်မြှင့်ရန်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ရန်
ကျေးဇူးတင် Fosco de HTCmania ဒီအထောကျအကူသင်ခန်းစာများယူပြီးသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - HTCdev အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
ရင်းမြစ် - HTCmania
ဒေါင်းလုပ် - GoldCard အထောက်အပံ့, GoldCard ကိရိယာများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC ထုတ်ကုန်များ၌ GoldCard တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ
2 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ကျေးဇူးတင်ပါသည်!!!!
HTC Desire S၊ Rom BlindBean v1.5 Jelly Bean AOKP ဖြစ်သည်
Sony သည်ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်တွင်စမတ်ဖုန်း ၇.၄ သန်းရောင်းချခဲ့သည်